स्थलगत चुनाब प्रचार सीमित गरेर कोरोना पिडितलाई सानो सहयोग गरौँ - Enepalese.com
स्थलगत चुनाब प्रचार सीमित गरेर कोरोना पिडितलाई सानो सहयोग गरौँ
इनेप्लिज २०७८ वैशाख २१ गते २३:३६ मा प्रकाशित
हरेक दुई बर्षमा एनआरएनए अमेरिकाको चुनाब हुने गरेको छ। अहिले आएर २०२१-२०२३ को चुनाबको दौड चलि रहेको छ। अहिलेको चुनाबमा भोटर सदस्य छन्। २०,१३९ मा ४२३ उम्मेदवार र अर्को २,००० जतिलै एनआरएन सदस्यहरुलाई चुनाब लागि रहेको छ होला । खासै चुनाब गराउने ५ जना चुनाब गराउने आयुक्तहरु, ४ जना प्रेसिडेन्ट उम्मेदवार ,१ जना प्रेसिडेन्टमा आबेदन दिएर निबेदन खारेज भएका छन्। साथै ३ जना सिनियर भाइस प्रेसिडेन्ट सहित ३४ बोर्ड अफ डाइरेक्टरमा १२ सिटको लागि ५८ जना चुनाबी दौडमा छन्।
अधिकार सम्पन्न आयुक्तहरु कसरी चुनाब सम्पन्न गर्ने र अर्को पटक फेरि विवाद रहित हुने भन्ने छन्। १०० जना उमेदवारहरु केहि छोडेर सबै देश दौडाहामा लागेका छन्। देशको विभिन्न ठाउँमा उम्मेदवारीहरुको मेला लागेको छ। अहिले हरेक नेपाली रहेको शहरमा ४/४ वटा मेलामा लागेको छन्। चार समूह उम्मेदवार प्रेसिडेन्टहरु आफनो उम्मेदवार लिएर ति शहरमा पुगेका छन्। स्थलगत चुनाब प्रचार नगर्ने र समुहगत नलाग्ने बिरलै होलान।
चुनाब र कोरानाको महामारी:
हामीहरु कोरानाको महामारीबाट केहि राहत भए पनि चुनाबको दौडमा हाम्रो र सहभागीहरु संक्रित नहुने कुरामा नकार्न सकिने स्थिति हुँदाहुँदै पनि प्रचार प्रसारमा संलग्न भएका छौँ। स्थलगत प्रचार प्रसार नगरिकन चुनाब जित्तिन्न भनेर दह्रो बजेटका साथ दौडमा गएको हुन् सक्छ। स्थलगत प्रचार प्रशार गर्ने काम २-४ हजार सदस्यबाट २० हजार र १०-२० स्थानको को सट्टामा ३०-३५ स्थान र एउतै स्थानमा २-४ हजार सदस्य भएको परिप्रेक्ष्यमा दरै तरिकाले सोचन बाध्य पनि बनाएको छ।
यहि घडीमा हामीलाई नेपाल अधिराज्य भरि कोरोनाको महामारी फैलिएको छ। हामी सबै उम्मेदवारको चासोको बिषय भनेको नेपालमा रहेका नेपालीहरु अझ नातागोताहरु र साथीभाईहरुमा जानु मुनासिब नै हो। अहिले हाम्रो प्रचार प्रसारमा नै पोस्टिंग भएका राम्रा कुराहरुले हाम्रा नेपालमा रहेका आफन्त साथीहरुमा समेत सकारात्मक भन्दा नकारात्मक समाचार प्रवाह हुने खतरा छ। हामी उम्मेदवारहरु केही सामाजिक सेवा गर्न भनि यस संस्थाको नेतृत्व कसरि लिने भनि लागि रहेका छौ। चुनावकै दौडमा हामीलाई संकट र सेवा गर्ने मौका आएको छ। चुनाबी प्रचार प्रशारको स्वरुप परिबर्तन गरि अहिले नेपालमा केही सहयोग गरि हाम्रो सकारात्मक समाचार प्रबाह गरौँ। केहि गर्दा केहि त्याग गर्नु पर्ने हुन्छ त्यो धुर्ब सत्य हो तर सो त्यागले ठूलो सहयोग हुन्छ ।
चुनाब प्रचार मिडिया मार्फतमा सीमित गरौ –
अहिले हामीसंग भएको फोन इमेल फेसबुक र जूमबाटबाट अझ बढी मददातासंग भेटघाट र छलफल र प्रतिकिया लिने सकिने हुँदा सो मा सिमित बनौ। स्थलगत भेटघाटमा पनि ५०-६० भन्दा कमसंग मात्र पहुँच हुने गरेकोमा सो भन्दा प्रभाबकारी जूम मिटिंगबाट गर्न सकिने कुरामा दुई मत हुने छैन।
जूम मिटिंगबाट चुनाब प्रचारको लागि स्टेट च्यापटरहरुले स्थानीय नेपाली संस्थाको सहयोगमा उक्त जूम मिटिंगहरुमा सहयोग र सहभागिता स्थलगत चुनाब प्रचार र प्रसार गरि दिनु पर्छ। १,००० भोटर भन्दा बढी भएका शहरमा एक भन्दा बढी मिटिंगको ब्यबस्था गरि दिने। मिटिंगको अबधि २-३ घन्टाको ब्यबस्था गर्ने। अहिले ४ समूहगत प्रेसिडेन्ट उमेदवार र प्रेसिडेन्टसंग आबद्ध नभएकालाई एक समूह एनसीसी उमेदवारको लागि र यस्तै गरि स्टेट च्याप्टरहरुका लागि २-३ वटा अलग ब्यबस्था अलग गरिदिने।
आफनै संस्थाको वेब साईटमा चनाव प्रचार गरौँ :
संस्थाले आफनै वेब साईटमा पद अनुसारको २ देखि ५ पाना उपलब्ध गराएमा सम्पुर्ण उम्मेदवार आफनो विवरण प्रस्तुत पोस्ट गरेमा उम्मेदवारले आफनो अनुभब र चुनाबी मेनिफेस्टो पोस्ट गर्ने पाएमा सबै सदस्यको माझमा निस्पक्ष प्रस्तुत हुन् सकने। सदस्यहरुलाई पनि फुर्सदको बेलामा एक स्थानमा गई उम्मेदवारको जानकारी लिन सकिने हुन्छ। यो सजिलो हुने हुदा यसरि मात्र प्रचार गर्ने ब्यबस्था पनि सजिलै संग गरिने कुराहो सो गरिनु पनि अहिलेको अवस्था हो भन्ने ठम्याई छ।
कोरोना पिडितलाई सानो सहयोग गरौँ :-
अहिले हामीहरु सन् २०२१ – २०२३ को सत्रको लागि चुनाबमा छौ हामीले जसरी पनि जित्नु छ। चुनाब जित्ने भनेको समाज सेवामा जित्ने नै त्यो नै ठूलो जित नहोला र ? अहिले नेपालको नेपालीहरुलाई सानो सहयोग र सहानुभूति आबश्यक छ। हामी चुनाबी उमेदवारले अहिले जति उमेदवार हुन् नोमिनेशन शुल्कको लागि तिरियो सो रकम बराबरको रकम हाम्रो कठिन बजेटबाट कोरोना पीडितलाई सानो सहयोग गरि उनीहरुको घाउमा मलम पट्टि गरौँ कि ?
यसरी संकलन गर्दा करिब १ लाख ६० हजार संकलन हुनेछ जुन अहिले अमेरिकाको नेपाली जनसंख्या १ लाख ६७ हजार डलर जति हुने रहेछ। एउटा सांकेतिक रकम दिन पनि राम्रो संयोग हो र उपयोग राम्रो भयो भने सहयोग को लागि तयार हुने छौँ। सो कसरि गर्ने भन्ने पछि पस्किने कोशिशमा छु । हाम्रो देखा शिखिमा म्याचिंग रकमको सहयोग हुने पनि प्रबल सम्भबलाई नकार्न सकिन्न। नोमिनेशन शुल्कको बराबर रकम सबैले सहयोग रकम सहयोग यस्तो घडीमा गर्दा हामीहरूलाई हाम्रो चुनाबी प्रचार कोड़मा समेत असर पर्ने छैन। चुनाबी प्रचार कोड़ लाग्छ भनि सो कोड़ सच्याउन आयोगलाई अनुरोध गरेर गर्न सकिन्छ कि ?
यो सानो रकम सहयोग कसरी बितरण अहिले अधिराज्य भरका ४६० गाउँपालिकाहरुको लागि दामासाहीले बितरण गर्ने सो रकम वडा वडासम्म पुग्ने ब्यबस्था गाउँपालिकाहरुले गरोश । नगरपालिकाहरुको लागि यस्तै गरि म्याचिंग रकमको सहयोग गर्नेहरुले हाम्रो मोडेलमा जस्तै सहयोग गर्न सक्छन।
अहिले सम्पूर्ण उमेदवारहरुले स्थलगत चुनाब प्रचार २ /४ दिनमा बन्द गरौँ।
जूम मिटिंग आफ्नै संस्थाको वेब साइटबाट सशक्त चुनाब चुनाब प्रचार गरेर १ लाख ६० हजार नेपाल मा सहयोग गरौँ । चुनाब खर्चमा छुटाएको बजेट बचेत गरेर आगामी सामाजिक कार्य सहयोग गर्न प्रण गरौँ । सबै नेपालीहरुमा राम्रो सूचना प्रबाह गरौँ ।
यस्को पंक्तिकार अहिलेको एनआरएनए अमेरिकाको राष्ट्रिय बोर्ड सदस्यको उमेदवार Aek Kshatry हुन्।
एनआरएन सम्बधित लेखहरु:-